Krita anogumburwa neDutch Treasure | Linux Vakapindwa muropa
Krita anogumburwa neDutch Treasure
Iyo Krita Foundation, iyo hwaro kuseri kwekusimudzira kweKrita, yakatanga chirongwa chinotyisa pamusoro pemamiriro azvino. Sezvineiwo, kunyangwe Mahara Software ane matambudziko neHaimari uye izvo zvakakonzera iyo Krita Foundation kuve nematambudziko emari kuti irambe ichishanda uye kuvhura inotevera vhezheni yesoftware yayo, software yakave inozivikanwa kwazvo pakati pevashandisi veGnu / Linux.
Sezviri pachena iyo Krita Foundation yakaongororwa neDutch Treasure, kupedzisa iyo Foundation yekusazivisa mimwe mitero yemakosi uye info-zvigadzirwa izvo zvaitora.
Zvepamutemo iyo Krita Foundation yaisafanirwa kuisa mutero muNetherlands nekuti ndiyo isiri-purofiti hwaro. Nekudaro, iyo yekuongorora yakaratidza kuti yaive nemari kubva kune infoproducts (makosi, magwara, nezvimwe ...) izvo yeDutch Treasure zvinoreva kuti chikamu chekambani uye chikamu hwaro.
Naizvozvo, ichive kambani, yaifanirwa kunge yakazivisa mutero wezimwe zviito zvavakaita mukuwedzera kune infoproducts. Dambudziko rinouya izvozvi. Iyo Krita Foundation yakanga yahaya mugadziri uyo aiita basa kubva kuRussia. Sezvo Russia isina kufunga nezvechiitiko ichi, iyo Krita Foundation haina kukwanisa kururamisa basa nemazvo, kuunganidza zvikanganiso. Yese Tiri kutaura nezvefaindi ye24.000 euros iyo yakadzikiswa kusvika ku15.000 euros, asi izvo zvakave nemutengo weKrita Foundation ye19.000 euros.
Izvi zvakanaka yaita kuti Foundation ipere zviwanikwa uye ndosaka iri kukumbira rubatsiro kubva kune wese munhu, nekuti neimwe nzira ivo havazokwanise kuenderera nekuvandudza kweKrita. Kana iwe uchida kushanda pamwe ne software, in Iyi link iwe unowana fomu yemupiro.
Kusvika nanhasi ndakanzwa nezvezvikwereti zvakawanda nematambudziko emitero kubva kumakambani ane chekuita neSoftware, asi zvinogona kudaro Krita ndiye wekutanga Mahara Software kugashira faindi yakadai. Ini ndinovimba zvechokwadi kuti hakuna mamwe akawanda mapurogiramu ane rudzi urwu rwechinetso pamwe nekuti Krita anokurumidza kugadzirisa mamiriro aya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Krita anogumburwa neDutch Treasure
Factorio 0.15 iri kune yako Linux distro
Maitiro ekuziva kana iyo GNU / Linux system iri 32 kana 64-bit